Iindaba-Usodolophu weSixeko sase-Dingxi, kwiPhondo lase-Gansu kwi-Dai Chao utyelele inkampani yethu ukuze axoxe kwaye akhuthaze iprojekthi yentsebenziswano ye-aluminium veneer curtain wall decoration material
USodolophu weSixeko sase-Dingxi, kwiPhondo lase-Gansu u-Dai Chao utyelele inkampani yethu ukuxoxa kunye nokukhuthaza iprojekthi yentsebenziswano ye-aluminium ngokwenene ikhethini eludongeni
USodolophu weSixeko sase-Dingxi, kwiPhondo lase-Gansu u-Dai Chao utyelele inkampani yethu ukuze axoxe kwaye akhuthaze iprojekthi yentsebenziswano ye-aluminium veneer curtain wall jewelry materials.
Kwi-1st NgoSeptemba 2020, u-Dai Chao, uSekela Nobhala weKomiti yeQela likaMasipala kunye noSodolophu weSixeko saseFoshan, wahlola iGuangdong Jianhan Group kwaye waba neengxoxo noZhou Jianxi, uSihlalo weQela leJianhan, ukuxoxa ngeprojekthi yokusebenzisana kwizinto ezenziwe ngokhuni lwe-aluminium. izimvo kwaye kwafikelelwa kwimvumelwano kwimiba ethile ekukhuthazeni iprojekthi.
I-Dai Chao ityelele i-Jianhan Group's aluminium veneer kunye nezinye izinto zokuhombisa izinto zokuhombisa kunye nokuboniswa kwemveliso, kwaye inolwazi olunzulu ngembali yophuhliso lweshishini, amacandelo eshishini, ukusebenza kweshishini, ubume bengingqi kunye nolwalathiso kunye neenjongo zotshintsho lwexesha elizayo kunye nokuphuculwa. Uthe iJianhan Group, njengeshishini labucala elidibanisa uphando kunye nophuhliso, uyilo, imveliso, ukuqhubekeka kunye nokuthengiswa kwezinto zokuhombisa zealuminium, inandipha igama eliphezulu kweli shishini. Iimveliso zibonakaliswa ngumthwalo olula, akukho ungcoliseko, iindleko eziphantsi kunye nokukhuseleka okuphezulu, kwaye ithemba lokuthengisa lihle kakhulu. I-Dingxi sisixeko esibalulekileyo sendawo "ye-Belt enye kunye neNdlela enye", enezibonelelo ezibonakalayo kwimathiriyeli ekrwada, ezothutho, ezabasebenzi, imakethi, iqonga, indalo kunye neminye imiba. Intsebenziswano noDingxi ngokuqinisekileyo iya kuvula uhambo olutsha lwenguqu kumashishini kunye nophuculo lophuhliso. Simema ngokunyanisekileyo iJianhan Group ukuba ityale imali kwaye iphuhlise eDingxi, kunye nemibono emitsha, ubuchwephesha kunye nolawulo, siya kukhuthaza ukuphuculwa kwamashishini kwaye sizabalazele ukwakha iDingxi Jianhan kwiChina enobuchwephesha obunempembelelo.
USodolophu u-Dai Chao ubenentlanganiso nosihlalo weqela leJianhan
UJianxi Zhou uthe iJianhan Group kudala icwangcisile ukuphuhlisa intengiso yasemantla ntshona, kwaye ubume bayo bucacile. I-Dingxi inesibonelelo esihle semithombo yolwazi, intengiso ebanzi kunye nemeko entle yeshishini. Amashishini aqinisekile kwaye aqinisekile ukwakha imodeli yeshishini leQela leJianhan eDingxi yohlaziyo lwefresco kunye notshintsho kunye nohlaziyo.
Iinkokheli ze-Ofisi kaMasipala wezeziMali kunye neKomiti yoLawulo yeDingxi yoPhuhliso loQoqosho kwiNdawo bezimase le misebenzi ingentla.